Warshadda Soo Saarida Peristaltic - Soosaarayaasha Soo Saarayaasha Qalabka Peristaltic, Alaab-qeybiyeyaal
Hordhac faahfaahsan Tixraaca qulqulka socodka: 0,0002-900ml / min sharaxaadda sheyga Naqshadeynta dahaarka birta, badhannada iyo muujinta waxaa loogu talagalay ergonomik heer sare ah iyo xagal 30 ° ah dhinaca hoose. Acid iyo alkali u adkaysta, daxalka u adkaysta. Ingiriisiga iyo Shiinaha, xawaaraha waxaa lagu kordhiyay 200 rpm iyo shaashadda taabashada ayaa koontaroola. Waxay ogaan kartaa bixinta fudud, waqtiga tirada, baakadaha joogtada ah, baaritaanka socodka iyo shaqooyinka kale. Astaamaha Taabashada opera shaashadda ...
Heerka qulqulka ugu badan: 380ml / min description description Waxsoosaarka wadista gawaarida waa weyn yahay, waxayna kaxeyn kartaa madaxyo bamka badan oo kala duwan sida taxanaha YZ iyo taxanaha DG, kaas oo bixin kara qulqulka socodka ee 0.02-380ml. Macluumaadka muuqaalka kumbuyuutarka ee '128 × 64 dot' ah oo muuqaalka muraayadda dheecaanka weyn leh isla mar ahaantaana si isku mid ah u soo bandhigi kara heerka qulqulka mashiinka iyo xawaaraha uu ku shaqeynayo habeynta socodka. waxay leedahay bilow / joogsi, horay / gadaal, xawaare buuxa iyo shaqooyinka kale ee gacanta ku haya. Qalliinka waxaa lagu dhammeeyaa badhanka xuubka ...
Sharaxaadda alaabta Qarax-caddeyn ah oo saddex waji ah oo isku mid ah oo aan caadi ahayn oo loogu talagalay miinooyinka dhuxusha dhulka hoostiisa (wajiga aan ahayn macdanta) iskuxirka ay ku jiraan methane ama dhuxusha dhuxusha, ama isku darka walxaha qarxa oo ay ku jiraan gaaska guban kara Class II B-T1-T4 ama uumi iyo hawo qalabka. Sanduuqa isgoysku wuxuu ku yaal xaga sare ee mootada waxaana loo mari karaa 4 jiho. Waxay ku habboon tahay labadaba xargaha caagga ah iyo fiilooyinka birta birta ah. Sanduuqa isgoysku wuxuu taageeri karaa 3-6 qaybood oo terminaal ah, iyo ...